WAR CUSUB: Maxay dowladaha Somaliya iyo Qatar u diideen go’aanka ka dhanka ahaa Turkiga? +XOG | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR CUSUB: Maxay dowladaha Somaliya iyo Qatar u diideen go’aanka ka dhanka...
WAR CUSUB: Maxay dowladaha Somaliya iyo Qatar u diideen go’aanka ka dhanka ahaa Turkiga? +XOG
Qaahira (Halqaran.com) – Wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacada Carabta ayaa magaalada Qaahira ku yeeshay shir deg deg ah oo lagaga arinsanayo weerarka Turkigu ku qaaday Kurdiyiinta Suuriya, shirkan oo ay ku baaqeen wadamada Masar iyo Sacuudigu waxa kasoo qayb-galay wasiirro iyo safiiro ka kala socday 21 ka dal ee Jaamcada Carabtu ay ka koobantahay.
Markii lagaaray xiligii codaynta waxa qaraarka Turkiga lagu Cambaaraynayo diiday in ay u codeeyaan Wadamada Somaliya iyo Qatar, Tv-ga dawlada Masar oo toos looga baahinayay khudbadaha ayaa jaray markuu khudbada bilaabay Safiirka Qadar u fadhiya Jaamacada carabta, Lakin waxa baahintii tooskii dib lasoo celiyay markuu Hadalka bilaabay masuulka Soomaaliya u hadlayay.
Safiir Tawfiiq Axmad Cabdilahi oo Soomaaliya u hadalay ayaa aad u amaanay dawlada Turkiga.
”Turkigu waa dawlad aan saaxiib nahay, waxayna noo dhiseen kaabayaal badan oo uu ka mid yahay ciidanka qaranka Soomaaliya arinta Suuriyana xal siyaasadeed ayay ubaahan tahay “
Gunaanudka qaraarka shirka laga soo saaray ayaa lagu Cambaareeyay weerarka u Turkigu ku qaaday Kurdiyiinta Suuriya, qaraarkan ayaa lagu yiri
”Duulaanka Turkigu uu ku qaaday Suuriya waa mid cadawnimo ah oo lagu qaaday dal carbeed oo ay waajib tahay in laga jawaabo‘‘.
Dowladaha Somaliya iyo Qatar
go'aanka ka dhanka ah Turkiga